OweSibaya uvakashele eSobantu | News24
OweSibaya uvakashele eSobantu
isithombe: lethiwe makhanyaUNksz Londiwe Ngcamu (kwesokudla) noSibusisiwe Jili odlala indawo kaZanele kwiSibaya.
UMLINGISI womdlalo kamabonakude Isibaya uNksz Sibusisiwe Jili nodlala indawo kaZanele uvakashele endaweni yaseSobantu ngoLwesine olwedlule mhla ziyi-7 kuNhlolanja (February) nalapho kade ezokweseka khona omunye umlingisi waseMgu­ngundlovu osanda kushaywa kanzima uNksz Londiwe Ngcamu.
UNksz Ngcamu washaywa walinyazwa kanzima emasontweni amabili edlule ngemuva komdlalo wabo weshashalazi owawukhonjiswa eWinston Churchill i-7 days of War.
UNksz Jili nowongokudabuka khona eMgungundlovu endaweni yaseDambuza uthe kubalulekile ukwesekana njengabantu besifazane abasemkhakheni wezokulingisa ikakhulukazi. Uthe ngesikhathi efunda ngezindaba zokulinyazwa kukaNksz Ngcamu washayeka kakhulu wezwa nobuhlungu.
“Sonke singabalingisi bangandawonye kumele sesekane ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe singangazizwa izinhlungu yena azizwayo kodwa ungumuntu wesifazane oqinile nonesibindi ngokuthi akwazi ukuthi aphumele obala akhulume. Kubuhlungu kakhulu uma ngabe ukuhlukunyezwa kanye nokugxekwa kuzophuma kumuntu okanye abantu osondelene nabo nozitshela ukuthi bayakuthanda.
“Ngifisa nje uLondiwe azi nje ukuthi sinaye kanti futhi sizomeseka kukona konke. Akekho yedwa kulobu buhlungu abuzwayo kodwa nathi sinaye,” kubeka yena.
Uqhube wathi uyafisa sengathi abantu besifazane abaningi abahlukunyezwayo bangakwazi ukuthi baphumele obala bazimele.
“Sekukhulunyiwe kaningi ngendaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane manje sekuyisikhathi sokuthi basukume bathandaze bazi futhi ukuthi bayimbokodo eqinile. Inkinga enkulu ngabantu besifazane ukuthi sikhothamela abantu besilisa kakhulu sibenze izindlondlo kanti iqiniso ukuthi nathi siqinile siyimbokodo singazenzela noma yini ngaphandle kwabo.Abantu besifazane kumele bazi ukuthi akumele bahlale ebudlelwaneni abahlukumezeka kubona. Kuyasijabulisa ukubona umuntu wesifazane onesibindi njengoLondiwe,” kusho yena.
UNksz Ngcamu uthe ukujabulele kakhulu ukuvakashelwa ilo mlingisi kanti futhi kumenze wakhuthazeke kakhulu ekuqhubekeni nokwenza umsebenzi wakhe.